November | 2020 | Lost Sheep for Christ
အိန္ဒိယလူမျိုးများအပေါ်ဘုရားသခင့်မေတ္တာတော် အာရုန်သည်ယောသပ်သည်ပေါလု Hackett က (OP) | ဧဝံဂေလိ | 1 1 / 1 4/2020 အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ကြီးကျယ်ခမ်းနားသောတိုင်းပြည်မှကျွန်ုပ်၏အစ်ကိုများ။ ကောင်းကင်ဘုံနှင့်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောသင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်သင်တို့ကိုခပ်သိမ်းသောသူတို့အားထာဝရမေတ္တာနှင့်စေလွှတ်တော်မူပြီ။ သင်တို့အားလုံး 1.353 ဘီလီယံ![i] The One, True God သည်အိန္ဒိယလူမျိုးများကိုကောင်းချီးပေးခဲ့ပြီးသင်တို့အားလုံးသည်သူ့အတွက်ထူးခြားသည်။ ငါတို့ကိုးကွယ်တဲ့တခြားနတ်ဘုရားတွေနဲ့မတူအောင်ဘာကထူးခြားတာလဲလို့ငါမေးကောင်းမေးလိမ့်မယ်။ ညီအစ်ကိုတို့၊ စကြာ ၀ inာ၌ထာဝရဘုရားသခင်နှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည့်အခြားအရာမရှိပါ။ လူတ ဦး ချင်းစီတွင်သဘာဝနိယာမတရားကိုရေးသားသောဘုရားသခင်တူညီသည်။[ii] သင်သည်အိန္ဒိယ, ဘုရားသခင်၏ဂုဏ်သိက္ခာအတွက်ဝေစု၏လူများ, သငျသညျသူ၏ရုပ်တုကိုဖွဲ့စည်းကြသည်သည်။ အိန္ဒိယသည်ကမ္ဘာကြီးကိုဆင်းရဲနွမ်းပါးပြီးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အလွန်နိမ့်သောတိုင်းပြည်အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဘုရားသခင့်ကျေးဇူးတော်သည်ကြီးမားလှသည်။ စကြ ၀ inာရှိသတ္တဝါအားလုံးကိုမျှဝေရန်သူသည်အိန္ဒိယရှိကလေးများအတွက်အထူးဂရုပြုမှုရှိသည်။ Christဝံဂေလိဆရာလုကာထံမှယေရှုခရစ်၏သွန်သင်ခြင်းမှ[iii] , “ဟုသူကထွက် သွား. , အခွန်ရုံးထိုင်နေသည်, လေဝိအမည်ရှိသောအခွန်ခံသည်ကိုမြင်သည်ဤပြီးနောက်; ငါ့နောက်သို့လိုက်လော့ဟုမိန့်တော်မူ၏။ ထိုမင်းသည် left အရာအားလုံး, နှင့် ထသို့လိုက်ကြ၏။ ထိုနောက်မှလေဝိသည်ကိုယ်တော်အဘို့အလို့ငှါမိမိအိမ်၌ကြီးစွာသောပွဲကိုခံ။ ၊ အခွန်ခံသောသူများနှင့်အခြားသောသူအပေါင်းတို့သည်ကိုယ်တော်မှစသောတပည့်တော်တို့နှင့်တကွစားပွဲ၌လျောင်းကြ၏။ ကျမ်းပြုဆရာနှင့်ဖာရိရှဲတို့ကသင်တို့သည်အခွန်ခံသောသူဆိုးသောသူတို့နှင့်အတူအဘယ်ကြောင့်စားသောက်ကြသနည်းဟုတပည့်တော်တို့ကိုကဲ့ရဲ့အပြစ်တင်ကြ၏။ ယေရှုကလည်း၊ ကျန်းမာသောသူတို့သည်ဆေးသမားကိုအလိုမရှိကြ။ နာသောသူတို့သာလျှင်အလိုရှိကြ၏။ ဖြောင့်မတ်သောသူတို့သည်နောင်တသို့ခေါ်ခြင်းငှါလာသည်မဟုတ်ဆိုးသောသူတို့ကိုခေါ်ခြင်းငှါငါလာသတည်းဟုမိန့်တော်မူ၏။ ကရုဏာသည်ဂျူးလူမျိုးများသာမကအိန္ဒိယလူမျိုးများအတွက်ပါဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင့ ပါဘူး ရုံပညာတတ်ဒါမှမဟုတ်ချမ်းသာတဲ့ခစျြသူကနေမကောင်းငတ်မွတ်, ဆင်းရဲသောသူကိုချစ်သောသူနှင့်သေဆုံး။ ဗြဟ္မဏ၊ ကတ္တရာယယ၊ ၀ ီရှယနှင့်ရှုရုစ် တို့သည်ဤအရာအားလုံးကိုအတိုင်းအဆမဲ့တန်ခိုးရှင်ဘုရားသခင်၏စားပွဲတွင်ကြိုဆိုကြသည်။ ငါတို့အားလုံးဖျားနေတယ် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖျားနာရုံသာမကဝိညာဉ်ရေးအရပိုပြီးပါ ၀ င်ပါသည်။ လူသားမျိုးနွယ်တစ်ခုလုံး၏ရန်သူမာရ်နတ်သည်လူတိုင်းကိုဆင်းရဲဒုက္ခခံစေလိုသည်။ သူကအိန္ဒိယကိုပိုတန်ဖိုးထားတယ်။ အဘယ်ကြောင့်? သူသည်ပြိုလဲနေသောသရပ်ဖ်ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးဖြစ်သောကြောင့်သူသည်အိန္ဒိယယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့၏အဖိုးတန်အရာများကိုမြင်သည်။ သင်သည်အသန့်ရှင်းဆုံးသောသုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူ၏လက်ထဲတွင်“ အပြောင်လက်တောက်ပသောအရောင်များ” ကိုပိုင်ဆိုင်သည်။ ဘုရားသခင်၏ကရုဏာတော်သည်ကောင်းကင်မှကျပြီးသားတော်ယေရှုခရစ်၏တပည့်တော်အားဤအမိန့်ကိုပေးခဲ့သည်။ တကျိပ်တပါးသောတပည့်တော်တို့သည်ဂါလိလဲပြည်သို့ သွား၍ ယေရှုမှာထားတော်မူသောတောင်ပေါ်သို့တက်ကြလျှင်၊ သူတို့မြင်သောအခါ သူ့ကို ပြပ်ဝပ်ကိုးကွယ်ကြ၏ အချို့မူကား၊ ယေရှုသည်အနီးအပါးသို့ချဉ်းတော်မူပြီးလျှင်၊ ကောင်းကင်ဘုံ၌၎င်း၊ မြေကြီးပေါ်၌၎င်း၊ စီရင်ပိုင်သောအခွင့်တန်ခိုးရှိသမျှတို့ကိုငါခံရပြီ။ သွား၍ လူမျိုးတကာတို့ကိုငါ့တပည့်ဖြစ်စေလျက်၊ ခမည်းတော်၊ သားတော်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌ဗတ္တိဇံကိုပေးကြလော့။ ငါသည်သင်တို့အားပေးသမျှသောပညတ်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်စေခြင်းငှါဆုံးမ;ဝါဒပေးကြလော့။ ငါသည်လည်းကပ်ကမ္ဘာကုန်သည်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူအစဉ်မပြတ်ရှိသည်ဟုတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူ၏။  CCC-1987 (ကက်သလစ်ချာ့ချ်၏ဓမ္မဓိ)္ဌာန်ကျကျ) “ သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ် တော်၏ကျေးဇူးတော်သည်ငါတို့ကိုအပြစ်လွတ်စေနိုင်သည့်စွမ်းအားရှိပြီးယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုငါတို့နှင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်ဖြစ်သည်။ နှစ်ခြင်းခံခြင်းဖြင့် ” ဘုရားသခင်သည်အိန္ဒိယလူမျိုးများကိုအလွန်ချစ်သောကြောင့်လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင်အသေခံရန်နှင့်လူသားမျိုးနွယ်တစ်ခုလုံး၏အပြစ်များကိုဆေးကြောရန်ယေရှုကိုစေလွှတ်ခဲ့သည်။ တဦးတည်း, မေးပါစေခြင်းငှါ အဘယ်ကြောင့် All- သူသညျဘုရားသခငျ, […]
भारत – भगवान को हाथ मा मायालु मोती
भारतको जनतालाई भगवानको प्रेम आरोन जोसेफ पल ह्याकेट (ओपी) | शुभ समाचार | १ १ / १ //२०२० मेरा भाइ-बहिनीहरू भारतको महान देशका। प्रभु तपाईंको परमेश्वर, आकाश र पृथ्वी को निर्माता, तपाईं सबै आफ्नो अनन्त प्रेम पठाउन! तपाईं सबै 1.353 अरब![i] एक, साँचो भगवानले भारतका मानिसहरूलाई आशिष दिईएको छ र तपाईं सबै उनका लागि विशेष हुनुहुन्छ। तपाईं मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ, के उहाँलाई अरू भिन्न बनाउँछन् कि अन्य […]
ند-مروارید دوست داشتنی در دست خدا
عشق خدا به مردم هند آرون جوزف پل هاکت (OP) | خبر خوب | 1 1 / 1 4/2020 خواهران و برادران من کشور بزرگ هند. خداوند ، خدای شما ، خالق آسمان و زمین ، عشق ابدی خود را برای همه شما بفرستد! همه 1.353 میلیارد شما![من] خداوند واحد ، مردم هند را برکت داده است و همه شما برای او خاص هستید. ممکن است از […]
ندوستان – د خدای په لاس کې مینه ناک موتی
د هندوستان خلکو لپاره د خدای مینه هارون جوزف پاول هیکټ (OP) | ښه خبر | 1 1 / 1 4/2020 زما ورو brothersو او خویندو د هندوستان لوی هیواد. ستاسو څښتن خدای ، د جنت او ځمکې خالق ، خپله ابدي مینه تاسو ټولو ته واستوئ! تاسو ټول 1.353 ملیارد![i] یو ، ریښتیني خدای د هندوستان خلکو ته برکت ورکړی او تاسو ټول هغه ته […]
Ҳиндустон-гавҳари меҳрубон дар дасти Худо
МУҲАББАТИ ХУДО БА МАРДУМИ ҲИНДУСТОН Аарон Ҷозеф Пол Ҳакетт (OP) | Хабари хуш | 1 1 / 1 4/2020 Бародарон ва хоҳарони ман кишвари бузурги Ҳиндустон. Худованд Худои шумо, офаринандаи осмон ва замин, муҳаббати абадии худро ба ҳамаи шумо фиристад! Ҳама 1,353 миллиарди шумо![i] Худои ягона ва ҳақиқӣ мардуми Ҳиндустонро баракат додааст ва шумо барои ӯ махсус ҳастед. Шумо метавонед аз ман бипурсед, ки ӯ чӣ фарқе […]
இந்தியா-கடவுளின் கையில் அன்பான முத்து
இந்திய மக்கள் மீது கடவுளின் அன்பு ஆரோன் ஜோசப் பால் ஹேக்கெட் (OP) | நல்ல செய்தி | 1 1 / 1 4/2020 இந்தியாவின் பெரிய நாட்டின் எனது சகோதர சகோதரிகள். உங்கள் கடவுளாகிய ஆண்டவரே, வானத்தையும் பூமியையும் படைத்தவர், அவருடைய நித்திய அன்பை உங்கள் அனைவருக்கும் அனுப்புங்கள்! உங்களில் 1.353 பில்லியன்![i] ஒன்று, உண்மையான கடவுள் இந்திய மக்களை ஆசீர்வதித்தார், நீங்கள் அனைவரும் அவருக்கு சிறப்பு. நீங்கள் என்னிடம் கேட்கலாம், மற்ற எல்லா கடவுள்களையும், நாம் வணங்குவதை விட அவரை வேறுபடுத்துவது எது? சகோதரரே, பிரபஞ்சத்தில் இருப்பது நித்திய கடவுளுடன் ஒப்பிடக்கூடிய […]
XUDONING HINDISTON XALQIGA BO’LGAN SEVGISI Mening buyuk Hindiston mamlakatidagi birodarlarim. Osmon va erni yaratgan Xudoyingiz Rabbim, abadiy sevgisini hammangizga yuboring! 1,353 milliard barchangiz![i] Yagona, Haqiqiy Xudo Hindiston xalqiga baraka berdi va siz hammangiz u uchun alohida ahamiyatga egasiz. Siz mendan so’rashingiz mumkinki, biz uni sig’inadigan boshqa xudolardan nimasi bilan farq qiladi? Birodarlar, Olamda abadiy Xudoga teng keladigan boshqa narsa yo’q. Har […]
India-La perla amorosa en la Mano de Dios
EL AMOR DE DIOS POR EL PUEBLO DE LA INDIA Aaron Joseph Paul Hackett (OP) | Buenas noticias | 1 1 / 1 4/2020 Mis hermanos y hermanas del gran país de la India. El Señor vuestro Dios, creador del cielo y de la tierra, os envíe su amor eternoatodos. ¡Todos los 1.353 mil millones de ustedes![i] El Único, Dios Verdadero ha bendecidoa[…]
India, et amantes habens in manu Dei
DILECTIO DEI AD HOMINES AB INDIA Paulus, Joseph Aaron Nabu (OP) | Latin | I I / I 4/2020 Fratres magnam Indiae regiones. Dominus Deus tuus, qui fecit caelum et terram, mittere ad vos omnes eius aeternam amor! 1,353 sescenti omnibus vobis[I] est unus, verus Deus est et tu es benedixitque Indos omne speciale sibi. Quod si dixeritis mihi: quid aliud faciunt illi, qui omnes alios deos, […]
India: la perla amorevole nella mano di Dio
L’AMORE DI DIO PER IL POPOLO INDIANO Aaron Joseph Paul Hackett (OP) | Buone notizie | 1 1 / 1 4/2020 I miei fratelliesorelle del grande paese dell’India. Il Signore Dio tuo, creatore del Cieloedella terra, mandaatutti il ​​suo amore eterno! Tutti gli 1,353 miliardi di voi![i] L’Unico, il vero Dio ha benedetto il popolo dell’Indiaevoi siete tutti […]